सुगममा उपचार नपाएपछि दुर्गम मानिने जुम्ला आउन थाले कोभिड बिरामी – SatyaPatrika
सुगममा उपचार नपाएपछि दुर्गम मानिने जुम्ला आउन थाले कोभिड बिरामी
जुम्ला – काठमाडौँको आखाबाट कर्णालीको (जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र मुगु) मगन्ते रुपमा हेरिने गरेको थियो । तर अब कर्णाली दुर्गम रहेन । सुगमबाट दुर्गम कर्णालीमा कोरोना संक्रमण विरामी उपचार गर्न आउन थालेका छन् । सुगम कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कोरोना संक्रमणका बिरामीले बेड र अक्सिजन नपाएपछि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गरेका हुन् ।
प्रदेश अस्पतालमा कोरोना संक्रमण विरामीले अक्सिजन र बेड नपाएपछि उपचारका लागि पाँच जना विरामी जुम्लास्थित अस्पतालमा आएको प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक राजीव शाहले बताए । उनले भने सुर्खेतबाट आएका पाँच जना बिरामी मध्ये दुई जनालाई अक्सिजन प्रयोग गरी उपचार थालिएको छ ।
जुम्ला अस्पताल अझै बाहिर जिल्लाबाट कोभिड विरामी थपिने सम्भावना रहेको छ । उनले भने सुर्खेत नेपालगज्जका अस्पतालमा विरामी भरीभराउ छन् । बिरामी बेड पाउन सकेका छैनन् । प्रतिष्ठानमा दुई सय बढी अक्सिजन सिलिण्डर मौज्दात रहेको छ । निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. शाहले भने मौज्दात सिलिण्डर मध्ये एक सय सिलिण्डर कोभिडका विरामीका लागि छुट्याएका छौँ।
आइसोलेसन वेड १२०, एचडीयू बेड २४ वटा, आइसियू वेड १२ वटा र भेण्टिलेटर १५ वटा रहेको छ । अन्य कोभिड स्वास्थ्य सामग्री, पिपिई, माक्स, स्यानिटाइजर अहिले २/३ महिना पुग्ने मौज्दात रहेको उनले बताए । प्रतिष्ठानले नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताललाई चिकित्सकसहितको टोली पठाएको छ । भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा जनशक्ति अभाव भएपछि प्रतिष्ठान विशेषज्ञ चिकित्सकसतिहको टोली आइतबार पठाएको हो ।
प्रतिष्ठानका एनेस्थेसिया तथा सघन उपचार विभाग प्रमुख डा. प्रवीण गिरी नेतृत्वको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली नेपालगञ्ज पठाइएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रतिष्ठानका ६ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली भेरी अस्पतालका वडामा खटिसकेका छन् ।
प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक डा. शाहले सघन उपचारका लागि चिकित्सकको अभाव रहेको जानकारी भेरी अस्पतालका मेसु डा. प्रकाश थापाले गराएपछि प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक टोली खटाइएको बताए ।सघन उपचार विभाग प्रमुख डा. प्रवीण गिरीसहित डा.अरुण श्रेष्ठ, डा. हरि न्यौपाने, नर्सद्वय सुष्मिता खड्का, तेन्जिङ लामा र प्यारामेडिक्स नरेन्द्र शर्मा भेरी अस्पताल गएका हुन् ।
उनीहरूले करिब १० देखि १४ दिनसम्म भेरीमा बसेर बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछन् । सरकारले कोरोनाको उपचार र व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रतिष्ठानमा टोली बनाएको छ । उक्त टोलीले जहाँ अप्ठेरो पर्छ, त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्नेछ । टोली निश्चित समयका लागि परिचालन भएको छ । भेरी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुँदा उपचार व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको टिमले त्यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने डा. गिरीले बताए ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा भन्छन् कुनै बेला नेपालगज्ंजवाट पोष्टमार्टमका लागि चिकित्सक कुरिरहेको जुम्ला उपचारका लागि आज चिकित्सक पठाउने भएको छ । उनले भने महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय जुम्ला जिल्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एनेस्थेटिस्ट प्रमुख डा प्रविण गिरी नेतृत्वमा ६ जना चिकित्सक भेरी अस्पतालमा खटिएका छन् । यो असाध्यै सुखद र सवल पक्ष हो ।
एम्बुलेन्स र शवबहान छैन
कोरोना संक्रमित बोक्ने प्रतिष्ठानमा एम्बुलेन्स छैन । कोभिड एम्बुलेन्स नहुदा संक्रमति अस्पतालसम्म ल्याउन समस्या भईरहेको छ । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको बेला पनि यस्तै समस्या झेल्नु परेको थियो । प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कोभिड एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको प्रतिष्ठानका प्रशासन अधिकृत द्धन्द्ध शाहीले बताए ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीलगायत संघीय सरकारबाट जुम्ला आउने मन्त्रीलाई कोभिड एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका हौँ तर समस्या समाधान भएन ।’,उनले भने, ‘ शवबहानको पनि उस्तै समस्या छ । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण बेला संक्रमितको जुम्लामा मृत्यु भएन । तर दोस्रो लहरमा पहिले जस्तो होला भन्न सकिदैन।
विजुली अभावले अक्सिजन उत्पादनमा समस्या
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टले फुलफेज रुपमा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । फुलफेजमा अक्सिजन उत्पादन गर्नका लागि ७६ किलोवाट विजुली आवश्यक पर्दछ र आवश्यक विजुली नहुदा अक्सिजन उत्पादन गर्न नसकेको हो । २ करोड २० लाख खर्च गरेर २०७६ सालमा ल्याइएको अक्सिजन प्लान्टले आंशिक रुपमा मात्रै अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छ ।
प्लान्टले उत्पादन गरेको अक्सिजन पाइप मार्फत सिमित बेडमा मात्रै पु¥याउन सकिएको तर सिलिण्डर भर्न नसकिएको निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. राजीव शाहले बताए । जुम्लामा राष्ट्यि प्रशारण लाइन पुगेको छैन । यहाँको (जुम्ला) उत्पादित विजुलीले सिलिण्डर भर्ने गरी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने क्षमता पुग्दैन । उनले भने अहिले नेपालगज्जबाट सिलिण्डर भरेर ल्याउने गरेका छौँ । देशभर अक्सिजन हाहाकार हुदै छ । यस प्रभाव जुम्ला पनि पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अक्सिज प्लान्ट सञ्चालन गर्न चाहिने मुख्य साधन (बुस्टर) नै छैन । खरिद प्रक्रियामै छौँ । छिटै अक्सिजन उत्पादन हुने गरी तयारीमा जुटेका छौ । प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्टको वायोमेटिक इन्जिनियर पनि छैन । सामान्य तालिम लिएका कर्मचारीले प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
कुनै सामान्य सामान खरिद गर्नपर्दा समस्या हुन्छ । उनले भने इन्जिनियरका लागि विज्ञापन गछौँ निवेदन पर्दैनन् । अक्सिजन प्लान्ट हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठानले चासो नदिएकै कारण कोरोना महामारीमा समेत अक्सिजन उत्पादन नभएकोप्रति जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले आपत्ति जनाए ।
फेरी पनि विजुलीको समस्या देखाउँदै उत्पादन हुन नसकेको कुरा आएको छ । तर यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनले जोड दिए । कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले पनि तत्काल अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर मेसिन ल्याउने तर सेवा सुचारु गर्न ढिलासुस्ती नगर्न समेत प्रतिष्ठानलाई डिसिसिएमसिको बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको सहायक प्रजिअ नन्दराम चौलागाईले बताए ।
झापाको कोइला फ्याक्ट्रीमा भीषण आगलागी